काठमाडौं महानगर वडा २ कार्यालयको भवन शिलान्यास – Nepalkakura
काठमाडौं महानगर वडा २ कार्यालयको भवन शिलान्यास
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आज वडा २ कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ । भ्याटसहित ५ करोड २८ लाख १० हजार ४५६ रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको वडा निर्माणका लागि बोलपत्रबाट न्यु ड्रागन निर्माण सेवाले भ्याटसहित ४ करोड १७ लाख १५ हजार ९४३ रुपैयाँ लागतमा कवोल गरेको छ ।
शिलान्यासपछि कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख शाक्यले, २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले महानगरको केन्द्रीय भवन र सबै वडाको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । त्यही निर्णय कार्यान्वय गर्ने क्रममा आज वडा २ कार्यालयको भवन शिलान्यास गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो — कार्यालय भवनमा मुल सडकबाट आउने बाटो साँघुरो छ । यदि स्थानीयले स्वतस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्नुभयो भने हामी सडक फराकिलो बनाउँछौं । हामी व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सम्मान गर्छौं । यसमा स्थानीयबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छौं ।
त्यस क्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य नारायण सिलवालले पनि स्थानीय सहयोगबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुने बताउनुभयो । स्थानीयबाट डुवान क्षेत्र व्यवस्थापनको माग आएको छ । तर आफ्नोतर्फबाट कुनै पनि प्रकारको दायित्व निर्वाह भएको देखिँदैन । यसरी गरिएको विकासमा अपनत्व हुँदैन । दिगो हुँदैन । उहाँले वडा कार्यालयले वडाको समृद्धि बढाउने बताउनुभयो ।
समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै कार्यक्रममा वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भुक्तानीमा समस्या नहुने बताउँदै निर्माणमा निर्माण पक्षले ढिला गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो । त्यसक्रममा स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधिकोतर्फबाट धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका किरण पाण्डेले वडालाई कर कार्यालयभन्दा सेवा कार्यालयका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिनुभयो ।
१—३—२—० क्षेत्रफल जग्गामा ७९१५.७५ वर्ग फुटको ३ तलाको वडा भवन निर्माण हुनेछ । भवनमा करीव ६० जना व्यक्ति अट्ने सभा कक्ष र प्रशासनिक कक्षसहितको भवनमा १० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन अट्नेछन् । महानगरका इञ्जिनियर बास्तु शास्त्रमा आधारित नेपाली शैलीको वडा भवनको जमिन तलामा वडा क्लिनिक र कर्मचारीहरुका लागि कक्ष बनाइनेछ । पहिलो तलामा वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र सचिवको कार्यकक्षसँगै सभा कक्षका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
अन्य वडा भवन निर्माणको अवस्था
वडा नं. ९ र १८ का नयाँ कार्यालय भवन उद्घाटनपछि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । वडा १४ को निर्माण सम्पन्नपछि गृह प्रवेश भइसकेको छ । यसको उद्घाटन हुन बाँकी छ । वडा २६ निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको औपचारिक उद्घाट गर्न बाँकी छ । इञ्जिनियर श्रेष्ठकाअनुसार वडा नं. ३ भबन निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । वडा नंं. ४ को भवन पुष मसान्त भित्र सम्पन्न हुनेछ ।
वडा २ को आज शिलान्यास सम्पन्न भएको छ भने वडा ६ को पहिलो ढलान सम्पन्न भएको छ । वडा २२ को दुईतला ढलान भएको छ । वडा १२, २१, २९ बोदपत्रको प्रक्रियामा छन् । वडा ३१ शिलान्यासको चरणमा पुगेको छ भने वडा १६ टेण्डर प्रक्रियामा पुग्ने चरणमा छ ।
Previous उखु किसानको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन
Next बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय